စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေး cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတွန်းအား၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုအပေါ်ကလေးဘဝမတရားသဖြင့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (2015) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
စှဲလမျးသူ Biol ။ 2015 ဇူလိုင်; 20 (4): 820-31 ။ Doi: 10.1111 / adb.12162 ။ EPub 2014 စက်တင်ဘာ 11 ။
Elton တစ်ဦးက1, Smitherman S က2, Young က J ကို2, Kilts CD ကို2.
ကလေးဘဝဒုက္ခအဆိုးဟာစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏အားလုံးအဆင့်ဆင့်သြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှ neuroendocrine, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအတွက်မြဲပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကျနော်တို့ကိုကင်းစွဲနှင့်ဆက်စပ် stress- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောဆက်စပ်အပေါ်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လျစ်လျူရှု၏သက်ရောက်မှုတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများငှါရှာကြံလေ၏။ ပြင်းထန်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့သမိုင်းနဲ့မှအလယ်အလတ်ကင်း-မှီခို (ဎ = 20) နှင့်မပါဘဲယောက်ျား (ဎ = 18) ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ကြားနေအတွေ့အကြုံများ၏ဇာတ်ညွှန်း-guided စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်စဉ်အတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ခံယူ။
အဆိုပါကြားနေဇာတ်ညွှန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း script များ striatal, prefrontal, posterior cingulate, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာ၏သွေးဆောင်ပြည်နယ်ကြိုတင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းယာယီနှင့် cerebellar ဒေသများ activated ။ စိတ်ဖိစီးမှု script ကိုအဘို့, မတရားသဖွငျ့လူတို့သညျ anterior precuneus နှင့်ဖြည့်စွက်မော်တာဧရိယာ (SMA) ၏လျှော့ချ activation ပြ; မတရားသဖွငျ့ပြင်းထန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တဏှာတုံ့ပြန်မှုများ၏အပြန်အလှန်ပြောင် rostral anterior cingulate cortex activation ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု script ကိုအဘို့, မတရားသဖွငျ့လူတို့သညျ သာ. ကွီးမွတျလက်ဝဲ dorsolateral prefrontal cortex activation ပြ။ တစ်ဦးမတရားသဖွငျ့-by-စိုးရိမ်စိတ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြောင် ventromedial prefrontal cortex activation ပါဝင်သည်သော်လည်းမတရားသဖွငျ့ပြင်းထန်မှုနှင့်တဏှာတုံ့ပြန်မှုများ၏အပြန်အလှန်သည်အမြင်အာရုံ cortex နဲ့ SMA ပိုမို activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
Tသူကမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတစ်ဦးမြင့်အစာစားချင်စိတ် anticipatory တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ကင်း-မှီခိုယောက်ျားတို့အတွက် cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်စိုးရိမ်စိတ်တုံ့ပြန်မှု stress- သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်စည်းမျဉ်းများနှင့်ထိန်းချုပ်အရေးယူရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျော့နည်းသွားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်အတူငယ်စဉ်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့တစ်ခုအသင်းအဖွဲ့ညွှန်ပြထွက်ပေါ်လာ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့မူးယစ်ဆေး-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် relapse များအတွက်အန္တရာယ် heightens သောဖြစ်နိုင်သောဦးနှောက်ယန္တရားများသို့ဝတ္ထုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသညျ။
စွဲ; ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့, ကိုကင်း; မူးယစ်ဆေးတွေကို; fMRI; စိတ်ဖိစီးမှု